पहिलो राष्ट्रिय परिचयपत्र पाँचथरकी १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई प्रदान गरियो::Online News Portal from State No. 4
पहिलो राष्ट्रिय परिचयपत्र पाँचथरकी १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई प्रदान गरियो
परिचयपत्र पाउने दोश्रो नागरिक भने गृहमन्त्री थापा आफैं भएका छन्। उनलाई भगवतीले परिचयपत्र दिएकी थिइन्।
बागलुङ, ३ मंसिर – पाँचथरको सदरमुकाम फिदिमवाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम सुरु भएको छ । गृहमन्त्री रामवहादुर थापा (वादल) ले फिदिम नगरपालिका-४ शान्तिपुरकी १०१ वर्षीया बृद्धा भगवतीदेवी भण्डारीलाई पहिलो परिचय पत्र दिएर वितरण सुरु गरेका हुन् । परिचयपत्र वितरणकालागि थापा काठमाडौंबाट हेलिकप्टरमा गएका थिए ।
परिचयपत्र पाउने दोश्रो नागरिक भने गृहमन्त्री थापा आफैं भएका छन्। उनलाई भगवतीले परिचयपत्र दिएकी थिइन्। बृद्धा अवस्थाकी उनले बसिबसि परिचय पत्र बुझिन्। उनलाई परिचयपत्र वुझ्न परिवारका सदस्यले फिदिम ल्याएका थिए।
प्रदेस नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङवो, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलगायतको उपस्थिति वितरण कार्यक्रममा रहेको थियो। पहिलो दिन सोमवार ५० वटा कार्ड बाडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र ब्यवस्थापन तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले बताए। न्यौपानेका अनुसार पाँचथरका लागि २ हजार ४ सय २९ वटा परिचयपत्र कार्ड ल्याइएको छ।
अरु छपाईको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए। सूचना संकलन भने ५२ हजार ७ सय ५४ जनाको गरिएको छ। यो आइतवार साँझसम्मको तथ्यांक हो। सूचना संकलनको काम गत असार ५ गतेदेखि भएको हो।सिंहदरवारमा ३२ सयको सूचना संकलन गरिएको उनले बताए।
यो कार्यक्रम पाँचथरवाट सुरु भएको हो। छपाई भएर ल्याएको कार्ड खोल्ने बित्तिकै सम्वन्धित ब्यक्तिको मोवाइलमा म्यासेज जाने भएकाले सोमवार कार्ड प्राप्त गर्ने सबैले सूचना पाइसकेको न्यौपानेले बताए। दोश्रो चरणमा झापा, संखुवासभा, महोत्तरी, सप्तरी, ललितपुर, रसुवा, चीतवन, तनहुँ, स्याङजा, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, कञ्चनजपुर र अछाम गरी १५ जिल्लामा विवरण हुने न्यौपानेले बताए।
गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले दुई वर्षभित्र देशका सबै जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य थालनी हुने जानकारी दिए। उने कार्य पाँचथरबाट प्रारम्भ भएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण, भूमि, शिक्षा, सरकारी सेवा लगायत सबै सेवाको अभिलेख समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि वडास्तरसम्म इकाइ स्थापना हुने बताइएको छ।